SIGESP: Sistemụ Njikwa Ọha na Nrụpụta - Sọftụwia Na-akwụghị Aka Maka Companlọ Ọrụ Nke Onwe | Site na Linux
SIGESP: Sistemụ Njikwa Ọha na Nrụpụta - Sọftụwia Na-ahụ Maka Privatelọ Ọrụ Nke Onwe
SIGESP: Sistemụ Njikwa Ọha na Eze
SIGESP bụ Sistemụ Nchịkwa ahaziri nke Venezuelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọha na Venezuelan nke Nhazi Ọha nke mba ahụ. Aha ya sitere na ndebiri ndị a: Integrated Management System for Public Sector Entities (SIGESP). Ọ bụ ezigbo sọftụwia na-akwụghị ụgwọ nke nwere ike bụrụ ihe nlere maka mba ndị ọzọ na usoro nchịkwa ọha na eze maka gọọmentị gọọmentị ha.
Companylọ ọrụ nkeonwe kere SIGESP Sistem, a na-akpọ ya otu ihe ahụ dị ka sọftụwia, ọ dịkwa ugbu a na usoro nke Internationalization, bụ Companylọ ọrụ nkeonwe nwere ihe karịrị afọ iri abụọ (20) nke ahụmahụ na mmepe, nyocha na nkwado nke ngwa nchịkwa na ahịa Venezuelan. Nke na-egosi anyị na ọ dị mma yana ọ dị mma mgbe ụlọ ọrụ ma ọ bụ atụmatụ nkeonwe na-emepụta Software na-akwụghị ụgwọ maka mpaghara niile.
Mana kedụ uru ọ bara na mmejuputa sọftụwia pụrụ iche n'okwu nlekọta, nke aka ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke aka ya wepụtara na obodo nke ya wetara mba ọ bụla? Ọfọn, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nweta ngwaahịa dị mma ma dị irè na nkwado nke nrụpụta, nghọta na ịdị mfe nke njikwa ọha na eze.
Na-agụtaghị uru mmeghe ọrụ dị na Nchịkwa Ọha ma ọ bụ nke Onwe, Ọzụzụ Ogo Ogo mmadụ na mpaghara Mmemme na Nchịkwa.
Na mgbakwunye, eziokwu ahụ bụ na Nchịkwa Ọha nke mba ọ bụla nwere Nchịkọta Mba na ihe omume nke Ọha na Ọha na-akwado ọrụ niile., ikuchi na mmepe nke ngwa a na usoro nlekọta na usoro iwu nchịkwa obodo.
Ọ na-enye ohere ịchekwa ego mba ofesi site na ịbubata ngwaahịa, ikikere na nkwado, na-agbakwunye ohere nke ime ka ọ nwekwuo ntụkwasị obi ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, yana nke ijikwa ojiji dị mfe ma jikọtara ọnụ na ngwaọrụ ndị ọzọ nke mba a na-ekwu maka ya ebe etinyere ya.
1 Kedu ihe bụ SIGESP?
2 Kedu ihe bụ SIGESP CA?
3 Kedu ihe Nchịkọta Ọha na Ọha na Ọha nwere ike inye mba?
4 Teknụzụ, kedu ka esi ewu SIGESP?
5 Kedu atụmatụ SIGESP Free Software nwere?
Kedu ihe bụ SIGESP?
SIGESP dịka ndị okike ya si dị:
una nhazi oru emebere n'okpuru echiche na usoro iwu enyere maka ulo oru oha; onye ebum n’uche ya bụ imepụta ihe ndekọ ego na ozi gbasara ego maka ime mkpebi, nke emepụtara site na imezu mmefu ego.
Nke ahụ bụ, ọ bụ usoro jikọtara ọnụ nke na-eme ka usoro nchịkwa nchịkwa dị mfe na ngalaba ndị ọha na eze ebe etinyere ya. Ihe mejuputara ya bu otutu modul nke ndi ahia obula ghari ime ya, bu ndi n’eme ihe di iche-iche ma nye ha nzaghachi n’oge n’oge banyere mkpa nke mmefu ego, njiri mara ihe, ndeko ya na ndebanye aha ya.
Kedu ihe bụ SIGESP CA?
SIGESP CA bụ ụlọ ọrụ na-eduga ndụmọdụ, mmepe na mmejuputa iwu nke Integrated Systems maka Nchịkwa Nlekọta nke Ọha na Ọha na Ọha na mba ya. Ugbu a kwuru na ụlọ ọrụ nkeonwe na-achọ ịnye ngwọta teknụzụ ka ukwuu na nke ka mma maka ahịa mba na Latin America.
Karịsịa, ịmepụta njikọ dị mkpa dị na Venezuela na n'èzí. ndị dị mkpa iji mezuo ebumnuche a, dị ka, na Dị afọ iri na ụma e IDP na-agba izu.
Successfullọ ọrụ ngwanrọ a na-akwụghị ụgwọ nkeonwe na-enye ndị ahịa ya:
Nọgide na-ahaziri mmepe site na otu ndị ọkachamara iji kwado ndị ahịa ya na imewe, ịhazigharị usoro nke usoro, ntinye, mmegharị, mgbasawanye na nchịkwa nke usoro nhazi njikwa ya.
Ọzụzụ ọgbara ọhụrụ na-aga n’ihu site na mmemme ọzụzụ iji zụọ ma nye echiche, ihe ọmụma na ikike nke ndị ọrụ na-eji sistemu maka arụmọrụ nke sistemụ.
O oru oma ma irè nkwado: Ọ nwere mmasị pụrụ iche na ọrụ ziri ezi nke ngwọta teknụzụ ya, nke mere na ọ gbalịsiri ike ịnye gị nkwado dị mkpa maka ihe ngwọta nke nsogbu na nsogbu.
Kedu ihe Nchịkọta Ọha na Ọha na Ọha nwere ike inye mba?
Free Software nke ụdị ọ bụla, mana ọkachasị nchịkwa, nwere ike inye ndị ọhaneze ma ọ bụ nzukọ ọ bụla, ịgbaso ntụkwasị obi dị ka o kwere mee na iwu iwu obodo nke obodo ebe ọ dị, na Ebumnuche na Azuma ahia nke ndi mmadu na ndi mmadu na-ajuputa ya, n'ihi ekele ya.
Ọzọkwa, Nchịkọta Ọha na Nchịkwa Ọha na-akwụ ụgwọ nwere ike inye nkwado dị mma ma dị irè maka arụmọrụ, nghọta, nchekwa na ịdị mfe nke njikwa ọha na mba ọ bụla. Ma kwe ka njikọta nke ọma na teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-abawanye ma na-ekwe nkwa ntụkwasị obi ya n'ihu ọha mmadụ.
N'ihe banyere Software efu, SIGESP na mba ebe e kere ya ka a gbanwere na iwu (CRBV, LOAP, LOAF, LOPA na LOT) na òtù (ONAPRE, ONCOP na CGR) nke na-achịkwa ọrụ nke National Public Administration (APN). Mana enwere ike imeghari ya na obodo ozo ebe etinyere atumatu ya.
Mana n'ozuzu ya, SIGESP ma ọ bụ Sọftụwia Ọha na Ọha nke Ọha nwere ike iweta usoro nhazi ọhaneze n'ọkwa dị elu na arụmọrụ., ma bulie ogo ọrụ nke ọha na eze (ụmụ amaala) na-enweghị ike iwepu nchebe na nghọta nke ozi na usoro emere.
Teknụzụ, kedu ka esi ewu SIGESP?
Jiri ojiji nke asụsụ mmemme akọwapụtara, dị ka:
Mmemme weebụ nke na - eme ka ọ bụrụ mmemme: ndị ahịa / sava.
Mfe nke debugging na oke ike ya, nke na-eme ka arụmọrụ ya dịkwuo elu.
Ihe owuwu ngwanrọ nke oge a dabere na Nlereanya ahụ - Onye njikwa (MVC)
Ọzọkwa, SIGESP na-etinye ụfọdụ teknụzụ ọgbara ọhụụ ma na-arụ ọrụ nke ọma na ihu ya., dị ka: Ọbá akwụkwọ EXT iji melite echiche na ADODB iji melite njikọ na nchekwa data, nke na-enyekwa ohere ịnweta akụkọ enyi na ịrụ ọrụ nke ọma.
Ọ na - ejikwa algorithm igodo nzuzo, nke na - enye usoro ọgbara ọhụrụ iji jigide igodo nnweta nchebe karị. Nnukwu nchebe na ọkwa usoro, nke pụtara na aha faịlụ ndị ahụ a na-egbu egbu na egosighi oke ha.
Kedu atụmatụ SIGESP Free Software nwere?
Mgbanwe a na-edozi maka mkpa na ihe achọrọ.
Ngwakọta modulu zuru ezu.
Mmelite usoro oge niile
Gbasochi iwu iwu ụtụ isi ugbu a.
Kensinammuo na mfe na-eji onyeicalzi interface.
Tonweta sistemụ nwere igodo nche onwe onye.
Nchekwa kachasị na ntụkwasị obi nke ozi a.
Otutu akuko iji tụọ, enwere ike ibudata na Excel na PDF.
Nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ maka njikwa kachasị mma, ngwa ngwa na nchekwa.
Ndị ahịa / Server Architecture.
Udo siri ike ma tozuru oke na PHP 5.
Mmejuputa iwu na ndi ọkwọ ụgbọ ala Mysql 5 na Postgres 9.4
Multi-platform (Windows, Linux) dabere na Weebụ.
SIGESP bụ ọmarịcha ahụmịhe na-aga nke ọma, ebe ọ bụ na otu aka ọ na-egosi mkpa mmekọrịta dị n'etiti thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Privatelọ Ọrụ na Nchịkwa Ọha nke otu mba n'ọhịa nke National Software Development, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ma ọ na-ahapụkwa ezigbo ndekọ na uru bara uru etu o si baa uru mmepe nke ngwanrọ ngwanrọ dị ka ngwaahịa na-ere ahịa maka Companylọ Ọrụ Nke Onwe.
N'akwụkwọ ndị ọzọ enwere ike ịkọwapụta banyere SIGESP, anyị ga-abanye n'ime ntinye ya, nhazi, modulu, ọrụ yana nhọrọ sistemụ. Otú ọ dị, na SIGESP webụsaịtị gọọmentị Nwere ike ịrịọ arịrịọ maka ọtụtụ ozi ndị ọzọ gbasara sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, nbudata ya, nhazi na Nkwado ya.
Ọ bụ uru na-arịba ama na ọ bụ kpomkwem Nkwado (dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ihu na ihu) na ọzụzụ bụ isi okwu siri ike nke sọftụwia na nzukọ. Nke kachasị mma, ha nwere SIGESP ntaneti ngosi na-enye gị ohere inyocha ike ya.
Anyị nwere olile anya na nke a ma ọ bụ nke ọzọ Sọftụwia Njikwa Ọha na Ọha na-aga n’ihu na-eto ma na-aga nke ọma na mba ọ bụla., na teknụzụ nke oge a n'efu dịka PHP7, MariaDB na Blockchain Technology (Blockchain), maka abamuru nke Ọha, Steeti na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » SIGESP: Sistemụ Njikwa Ọha na Nrụpụta - Sọftụwia Na-ahụ Maka Privatelọ Ọrụ Nke Onwe
Onye ọrụ na-enweghị obi ụtọ dijo
Enweela m nyocha, weebụsaịtị ahụ anaghịzi enye nbudata nke koodu isi dịka ọ mere maka afọ 3 ruo 4, dịka ihe a gwara m. Ugbu a, ị ga-akwụ ụgwọ iji nweta njikọ na koodu isi na nchekwa data, ma dị oke ọnụ maka ndị chọrọ ịnwale ya.
Zaghachi onye ọrụ na-enweghị obi ụtọ
Paymentgwọ ahụ bụ ihe ruru $ 1 na ego mba Venezuelan, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere SIGESP ma ọ bụ nweta ihe mgbakwunye, gbalịa nyochaa njikọ weebụ a:
Andres sandoval dijo
Ndewo ezigbo mgbede, ihu ọma, mmadụ maara aha njirimara na paswọọdụ nke ngosi ...
Zaghachi andres sandoval
Data ịbanye usoro:
Onye ọrụ: SIGESP
Mmekọrịta gini dị na sistemu a na SUGAU? Ha bu otu ihe ma obu bu otu modul nke ozo?
Ekele, DM! SUGAU bụ ndụdụ nke SIGESP. N'ịbụ ndị Venezuelan Free Software, ụfọdụ ụlọ ọrụ agbanweela ma gbanwee ya ruo n'ókè nke ịbụ ndị a na-ewere dị ka ndụdụ. Ọmụmaatụ: http://www.uds.edu.ve/sugau/sigesp_conexion.php
Abụ m Onye Ọkachamara Na-arụ Ọrụ Na Ọkachamara, na-ebi ugbu a na Argentina. Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ m nọ na ọrụ gị
Daniel vergara dijo
Super magburu onwe, bụ ihe m chọrọ ngwa ngwa
Zaghachi daniel vergara
Duplicated ihe ngwa magburu onwe ya iji mee bakcups na sistemụ gị
APT: anyi na agwa gi ihe ngwangwa mejuputara